အချိန်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 12, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
ငါတို့ရဲ့ပထမ Zoomerang စစ်တမ်းရလဒ်များမှာ! အချိန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ဘလော့ဂ်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အခြားအရာများအတွက်စျေးကွက်သမားများက ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအချိန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးအားနည်းနေခြင်း၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းများကိုပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းခြင်းမပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ရလဒ်များကိုဤတွင်ဖော်ပြပါ (ဇယားတင်ပို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာ၏လျှောက်လွှာတွင်ပါဝင်သည် - Zoomerang!)
သူကပြောပါတယ်, စာရင်းဇယားနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အပိုင်းအစပေး ... ငါတို့လုပ်ငန်းစဉ်များအလိုအလျောက်ကြောင်းအချိန်ချွေတာကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စျေးကွက်နည်းပညာကုမ္ပဏီများအဘို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဤနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းမှကျွန်ုပ်သည်ဒေတာများကိုရယူရန်အချိန်ပမာဏများစွာကုန်ဆုံးခဲ့သည် analytics သုံးစွဲသူတစ် ဦး အတွက်စိတ်ကြိုက်အစီရင်ခံစာများနှင့် dashboard များတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးမြောက်ခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းအတွက်အချို့သောသွင်းအားစုများကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ထောင်သောင်းချီသောသော့ချက်စာလုံးများသည်လူတို့၏ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းတာဝန်မဟုတ်ဘဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီအတွက်လုံးဝဖြစ်နိုင်သောအရာများမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိ၊ မရှိကိုခွဲခြားရန်၊ အုပ်စုဖွဲ့ရန်နှင့်စစ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်သမားတွေကအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အချိန်ယူနေသလား၊ ဒါမှမဟုတ်လက်စွဲလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမလားဆိုတာကိုလည်းတွေးမိတယ်။ ငါတူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ကြိမ်တတန်းတည်းလုပ်နေတာမခံမရပ်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းပိုမိုလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းရှာနေတာပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီလာမည့်စစ်တမ်းများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောခေါင်းစဉ်!